OnePlus akagbu gam akporo Oreo OTA maka OnePlus 5 | Gam akporosis
Onye OnePlus 5 agaghị enweta mmelite ahụ nwa oge na gam akporo Oreo
Edere Ferreno | | Nkuzi, Gam akporo nsụgharị
OnePlus bụ akara nke ọtụtụ bara uru maka amụma nkwalite ya. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ bụ ama ama maka imelite ekwentị ya niile na ụdị sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ. Ihe ha mere ọzọ na mbata nke gam akporo Oreo. Ọ bụ ezie na, ọ dị ka ọihe adighi aga dika egosiri maka OnePlus 5. Ebe ọ bụ na ekwentị ga-echere.
N'oge na-adịbeghị anya E kwuru na gam akporo Oreo ROM nwere karịa Nougat karịa ọhụrụ gam akporo. Ihe na-akpata nsogbu. Ya mere, OnePlus 5, nke na-enweta gam akporo Oreo OTA, ị ga-echere obere oge.
O doro anya na ika ahụ emeela ụfọdụ isi chinchi. Dị ka ha emelitela ụfọdụ akụkụ dị egwu nke sistemụ maka gam akporo Oreo, na-ahapụrụ ha koodu gam akporo Nougat. Dịka ọmụmaatụ, ntọala usoro anaghị arụ ọrụ. Ihe nke butere nsogbu batrị na ọdịda arụmọrụ ngwaọrụ.
Oge ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ahụ chọrọ inye mmelite ahụ arụghị ọrụ na ya. Ya mere, ha ekpebiela na nwa oge wepu nwelite site na OTA na OnePlus 5. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ n'onwe ya ekwenyela na ọ ga-abịa n'oge na-adịghị anya. Ma, ha kwesiri dozie nsogbu ndị a na mbụ.
Ihe amabeghị Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji mezie njehie ndị a dị na mmelite gara aga. Yabụ, anyị ga-echere ka ụlọ ọrụ ahụ kpughere ozi ndị ọzọ. Ọzọkwa, ndị ọrụ na-atụ anya na nsogbu arụmọrụ nke bilitere na-apụ n'anya.
Ya mere, Anyị nwere ike ichere maka OnePlus ikpughe ozi ndị ọzọ gbasara ya. N'ezie, ọ na-ewe iwe nke ukwuu maka ndị ọrụ, mana ọ ka mma ịkwụsị mmelite a tupu nsogbu ọ bụla ebilite. Ọ kwesịrị ịdị njikere ọzọ n'ime izu ole na ole sochirinụ. Mgbe ahụ, ọrụ na OnePlus 5 nwere ike maa kwalite ka gam akporo Oreo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Onye OnePlus 5 agaghị enweta mmelite ahụ nwa oge na gam akporo Oreo
LEAGOO S9 Pro nwere ike bia na ihuenyo AMOLED nke 6.21 inch
Nkọwa Nokia 6 2018 na-agbapụ